Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 15/11/2020)
Mutungamiri wekutaura Chirungu achasangana newe pa Pineapple hostel mutaundi Rekare re 2.5 maawa’ kufamba uchifamba uchitenderera Prague. Iwe unozotanga rwendo rwekufamba mune inozivikanwa Old Town square, enderera kune iconic Charles Bridge. Kubva kunzvimbo yevashanyi kuenda kunzvimbo dzakanakisa dzeguta masikati uye zvinwiwa, Prague ita uye usaite, iwe uchapedzisa rwendo nematani ekurumbidza uye nyaya dzausingazomboverenge nezvazvo mumabhuku anotungamira.
Pamusoro pezvakakurumbira zvezvakaitika kare, Berlin inopa marwendo akasiyana acharatidza Berlin kubva kwakasiyana mativi; artistic, foodie, kana zvinwiwa’ yakanangana. mune Yekutanga Berlin yemahara yeguta kufamba rwendo, uchashanya 6 yemakona makuru eBerlin, uye inzwa nezve nyaya dziri seri kwemadziro eBerlin netsika.
Pamusoro peye huru uye inonakidza gwara, Zurich rakanakisa guta rekufamba nzendo nderekugadzirira kudenga. Sei uchifamba kuburikidza neguta rekare uye Zurich inosimbisa mune yechinyakare maitiro, paunenge uchikwanisa kuinamisa nechokoreti yeSwiss yeSwitzerland. Edzai truffles, dzidza nezve kubviswa kwekocoa uye shanyira iyo akanakisa chocolatiers muEurope sekuyemura kwaunoita kereke yeLindenhof neyeGrossmunster.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "7 Yakanakisa Yemahara Ekufamba Ekushanya MuEurope" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-free-walking-tours-europe%2F ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)